စစ်ကိုင်းမြို့သို့ တိုင်းဒေသကြီးရုံးများ ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့ပေးရန် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖ?? - Yangon Media Group
စစ်ကိုင်း၊ မေ ၂၅
၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်း ပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ စစ်ကိုင်း မြို့သို့ တိုင်းဒေသကြီးရုံးများ ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့ပေးရန်အတွက် မေ ၂၅ ရက်က နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးသို့ တတိယအကြိမ်စာတင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”စစ်ကိုင်းမြို့က ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်း ပုံအခြေခံဥပဒေတွေအားလုံးမှာ မြို့တော်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတယ်။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် လက်ထက်မှာ တစ်ကြိမ်၊ သမ္မတဦးထင် ကျော်လက်ထက်မှာ တစ်ကြိမ် စာတင်ခဲ့ပေမယ့် အကြောင်းပြန်ကြား ခြင်းမရှိလို့ ထပ်တင်ရတာပါ။ ခရိုင် မြို့ မုံရွာမှာ တိုင်းဒေသကြီးရုံးစိုက်တာ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို ဆန့်ကျင်နေတယ်။ ဒီ တောင်းဆိုမှုက စစ်ကိုင်းမြို့ခံ ပြည်သူလူထုရဲ့ သဘောဆန္ဒပါ၊ တရားဥပဒေနဲ့အညီ ထမ်းဆောင်နေတဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာ ပြည်သူဆန္ဒမို့ အလေးထားပြီး တရားဥပဒေနဲ့အညီ တိုင်းဒေသကြီးရုံး တွေအားလုံးကို စစ်ကိုင်းကို ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့လာဖို့ အခုသမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်လက်ထက်မှ တတိယအကြိမ် စာတင်တောင်းဆိုတာပါ” ဟု စစ်ကိုင်းမြို့တော်သို့ တိုင်းရုံး များအားလုံး အခြေခံဥပဒေနှင့် အညီ ပြန်လည်ရောက်ရှိရေး ဦး ဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆွေမြင့်စိုးက ပြောကြားသည်။
တတိယအကြိမ် စာတင်ရာတွင် စစ်ကိုင်းမြို့၏ ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍ၊ ပညာရေးကဏ္ဍ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်အချက်အချာ ကျမှုများစသည့် မြို့တော်အင်္ဂါရပ်နှင့်ညီညွတ်မှုအကြောင်းများနှင့် တိုင်းဒေသကြီးရုံးပြောင်းရွှေ့လာပါက ယခင် မူလတိုင်းရုံးမြေနေရာ အဆင်သင့်ရှိသည့် အကြောင်းအရာများကို အချက်အလက်နှင့် တင်ပြတောင်းဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။ စစ်ကိုင်းမြို့သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ချင်းပြည် နယ်တို့၏ ဝင်ပေါက်မြို့ဖြစ်ပြီး စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏ မြို့ကြီးလေး မြို့တွင် တစ်မြို့အပါအဝင်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
အဝေးကွင်းတွင် အနိုင်ရခဲ့သော်လည်း ပွဲမပြီးသေးဟု နည်းပြ အာစင်ဝင်းဂါး သတိပေး
သာစည်မြို့နယ်တွင် စပါးရိတ်သိမ်း ခြွေလှေ့စက်များ အသုံးပြု၍ စပါးခင်းများကို ရိတ်သိမ်း
ဂျာမနီ၏ ငါးပွဲဆက် နိုင်ပွဲပျောက်မှု အတွက် နည်းပြ ဂျိုအာချင်လို စိတ်ပျက်၊ အာဒိုဂန်နှင့် ဆုံခ?
ပြည်တွင်း လုပ်သားများအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပေါင်း ၅၆ဝဝ ကျော်ဖန်တီးပေးမည့် ရင်းနှီ??